Kadhaa Rabbiitu caala - NuuralHudaa
Kadhaa Rabbiitu caala
Rabbi kadhachuun hundarra caala
Du’aa’ii godhatuun sadarkaa guddaa qaba. Rabbiin warra isa kadhatuuf qeebaltii beellama seenee jira. Rabbiin ol tahe akki je’e:
“Gabroottan kiyya hoggaa anarraa si gaafatan Ani dhihoo, kadhaa warra na kadhatuu yeroo isaan na kadhatan nin qeebala. Haa naaf awwaatan, ammas haa natti amananii akka qajeelloo argataniif.” Al-Baqaraa: 186
Ammas Rabbiin ol tahe akkana je’e:
“Rabbiin kee akki je’e na kadhadhaa ani isiniifin awwaadha” Ghaafir: 60
Warra qalbiin gad if qabee isa kadhatu, warra kadhaan isaanii garsiifannaa fii dhageeysifannaarraa qulqullooyte, kan halkan hoggaa namni rafu isatti hasaasan Rabbiin kadhaa isaanii ni qeebalaaf. Rabbiin ol tahe akkana je’e:
﴿ادعوا رَبَّكُم تَضَرُّعًا وَخُفيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُعتَدينَ﴾﴿وَلا تُفسِدوا فِي الأَرضِ بَعدَ إِصلاحِها وَادعوهُ خَوفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحمَتَ اللَّهِ قَريبٌ مِنَ المُحسِنينَ﴾
“Rabbii keeysan isaaf gad if qaboo fii dhooysoo haala taataniin (sagalee gad qabaa) kadhadhaa, Inni warra dangaa dabru hin jaalatu. Ammas dachii keeysatti badii hin dalaginaa eega (Rabbiin) tolche booda, Isa qofa kadhadhaa soda fii kajeellaadhaan. Rahmanni Rabbii warra gaarii dalaguuf dhihoodha.” Al-A’araaf: 55-56
Ragaaleen du’aa’ii fii sadarkaa isii addeeysu Qur’aana keeysa guutuudha. Hangi dubbanne kuni nama Rabbiin gaarii isaaf fedheef ni geeysi. Hadiisa Rasuulaa sallallaahu aleeyhi wasallam keeysas sadarkaan du’aa’ii haalaan himamee jira.
ليسَ شيءٌ أَكْرمَ علَى اللَّهِ منَ الدُّعاءِ
“Rabbi biratti wanni du’aa’iirra caalu hin jiru” Sunana Tirmiizi: 3370
Kadhaan Rabbi biratti waan akkaan guddootii fii irra caaltuu hojiiti. Rabbi biratti nama isa kadhatuutu jaalatama, nama isa hin kadhanne Rabbiin inumaa itti dallana, garuu ilmi nama hanguma ati waa gaafattu si jibbaa deema. Tan Rabbii faallaadha hoggaa kadhatte si jaalata, siif qeebala, hoggaa isa kadhachuu dhiiftee boonaan gargalte sitti dallana. Hadiisa sunana tirmiizii keeysatti gabaafame kan Abuu Hureeyraan odeeysu keeysatti, Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam akkana je’e, “Rabbiin nama isa hin kadhanne itti dallana.” Sunana Tirmiizi: 3373
Rahmaan akkana! kan dachii fii samii uume, kan wanni hundi isaaf sujuuddu anaa fii ati isa kadhachuu jaalata, nuti kadhaa dhiisuun sababaa dallansu Rabbii itti buutu tahuu dandaha. Isa kadhachuu qofaa miti Rabbiin ka jaalatu, warra isa kadhateef qeebaluus jaalata.
Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam akki je’e, “namni muslimaa tokko yoo kadhaa takka Rabbi kadhate waan cubbuu fii fira muruu hin kadhatiniin Rabbbiin isaaf waa sadii keeysaa takka isaaf kennu malee hin dhiisu: Du’aa’ii isaa daddaffiin qabeelamatee waan kadhate argatuu, ykn galata aakhiiraa akka tatau isaaf ol kaayuu, ykn balaa fakkaataa kadhannaa isaa tahe isarraa deebisuun isaaf qeebala.” Hoggaa kana sahaaboonni “Akkas taatu du’aa’ii ni baayyifne” ja’aniin. Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam, “Kennaa Rabbiitu irra hedduudha” jechuun deebiseef. Sahiihul Adabul Mufrad: 547, Sunana Tirmiizii: 3604.
Eeyyee, kadhannaa teenyarra kennaa isaatu dabalaa deema yoo nuti du’aaii baayyifne. Hadiisa Salmaan Al-Faarsiin Rabbi odeeyse keeysatti, Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam akki je’e,
إن ربكم تبًارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا
“Rabbiin keeysan guddaa fii ol tahaan arjaa fii qaanfataadha, gabrichi hoggaa kadhaaf harka itti ol qabe qullaa gad deebisuurraa ni qaanfata.” Sunana Abuu Dawuud: 1488
Rabbiin ol tahe hangan takka du’aa’ii gabricha dhugaan isa kadhatee qeebaluu fii deebisuu jaalata. Inni arjaa hundaa oliiti, gabricha isaatiif kadhaa qeebaluu jaalata. Atummaan kadhaa isaa jabeeysi. Rabbi kadhatuun balaa buutee fii tan hin bu’inillee namarra deebifti.
Hadiisa biraa keeysatti Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam akki je’e,
الدُّعاءُ ينفع مما نزل و مما لم ينزِلْ، فعليكم عبادَ اللهِ بالدُّعاءِ
“Du’aa’iin waan bu’ee fii waan hin bu’iniifillee ni fayyada, kadhaa jabeeysaa gabroottan Rabbii” Sahiihul Jaamii: 3409
Qadara Rabbi kan murtaawellee du’aa’iin jijjiruu dandeeysi yoo dhugaan Rabbitti citan wanni Rabbirraa hin milkooyne hin jiru. Hadiisa biraa kan Salmaan Al-Faarsiin odeeyse keeysatti, Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam akki je’e:
لا يردُّ القضاءَ إلا الدعاءُ، ولا يزيدُ في العمرِ إلا البرُّ
“Murtii Rabbii (Qadara) wanni deebisu du’aa’ii malee hin jiru, umrii wanni dabalus gaarii dalaguu malee hin jiru” Sunana tirmiizii: 2139
Rabbiin waan uume hundaaf sababaa godhe, ilmaan argatuu bultii jaaruu sababa godheef, fayya dhaba qorichaan fayyaa argatuu sababaa godheef, akkuma san Rabbiin ol tahe qadara fii murtii isaa jijjiruuf du’aa’ii sababaa godhe. Balaan murtooytelleen kadhaa gabrichaatiin hafti, musiibaan kadhaa Rabbiitiin kheeyritti jijjiramti. Du’aa’iin waan bu’ee argamee fii waan hin argamin hunda deebisuuf sababaa taati, jaalalaa fii dhiheenya Rabbiitiif sababaa taati. Du’aa’iin tee qeebalamuu wanni beeytuun ati du’aa’iitti jabaachuu keetii. Du’aa’iitti jabaachuun kophaa isaa ibaadaa Rabbiin haalaan jaalatu qabachuudha. Rabbiin si jaalannaanuu warra kadhaa isaatti jabaatu si godhaa jira. Itti jabaadhu du’aa’ii tee. Yaa Rabbi akkan si kadhadhu naaf laaffisiin kadhaa warra gaariiti.
Rasuulli sallallaahu aleeyhi wasallam Mu’az bin Jabliin akki je’ee, “Yaa Mu’az! Ani sin jaaladha. Yaa Rabbi zikrii tee godhuu, galata siif galchuu fii ibaadaa siif bareechee hojjachuurratti na gargaari ja’ii Rabbi kadhadhu”
Yaa Rabbi si kadhachuu warra osoo hin hifanne amataa gadaa kadhatu nu godhi.
Anis Kelifa says:
Mashaa Allah Heddu gaaridhaa
JZK keyraan Imrii dheeraadha.
Raabbiin isiin irraa haa jalatuu, Nulee warraa irraa bu’aa bufatuu Raabbiin nu haa godhu.
September 27, 2021 sa;aa 10:47 pm Update tahe